BAFAKELWE AMANZI OKOKUQALA EMVA KWEMINYAKA BENGENAWO – Sivubela intuthuko Newspaper
UMnuz Nsindiso Mcinelwa uthi bayakujabulela ukufakelwa amanzi emva kweminyaka bephila ngokuyocela emijondolo engomakhelwane
UBE injabulo yodwa kubahlali basemjondolo eMandeni eThekwini ngenkathi bethola amanzi nezindlu zangasese ezingomahamba nendlwana emva kweminyaka engangeshumi behlala kulendawo.
Lendawo enemijondolo engama-38 nabahlali ababalelwa kwabangama-80 ibingenawo amanzi, abahlali bebehamba indawo eyibangana ukuyokha amanzi kweminye imijondolo engomakhelwane.
Ngeledlule uMasipala weTheku ufakele umpompi wamanzi kanye nezindlu zangasese eziyisithupha.
Ngokusho kukasihlalo wasemijondolo yaseMandeni eseRedhill uMnuz Musa Duma, ukufakelwa kwalezidingo kuzokwenza omukhulu umehluko emphakathini futhi kuzogwema nokuthi abantu babe uvanzi njengoba kunothaqa ezweni ukuvikela ukubhebhetheka kwegciwane lecorona.
“Besihlupheka kakhulu kangangokuba abantu bekumele basebenzise ujantshi wesitimela ukuthi bazikhulule noma amahlathi aseduzane. Inkinga ibiba sebusuku njengoba bekumele basebenzise oshekhasi bese bephosa emgodini wendlu yangasese eyadilizwa kanye neminye imijondolo ngo-Januwari,” kusho uMnuz Duma.
Uthi isimo samanzi isona ebesiyinkinga kakhulu njengoba bekudingeka ukuthi abantu bahambe ibangana ukuyokukha amanzi nobekubaqhatha namaphoyisa njengoba kungavumelekile abantu ukuba babe uvanzi. “Kanti futhi besingakwazi ukwenza noma yini ngamanziikakhulukazi ukuhlamba izindla njalo njengoba besisokola kodwa manje sesizokwazi ngisho noma ikangaki ngosuku,” kusho uMnuz Duma.
Lokhukufakwa kwezindlu zangasese namanzi kuyingxenye yohlelo lukamasipala weTheku olwabikezelwa usodolobha ukhansela Mxolisi Kaunda ngaphambi kokuqala kukathaqa. Kusukela loluhlelo lwaqalwa, idolobha iTheku selihlinzeke izindawo eziningi ezihlukene ezakhele lomkhandlu ngezidingo ngqangi kwaphinde kwahlanzwa amahostela, imjondolo, amahhovisi abahwebi abasafufusa kanye namarenki angaphansi kwalelidolobha.
“Siyakuthokozela kakhulu ukuthi nathi sesizokwazi ukuhlala endaweni yethu singalokhu sigcogcoma. Isimo besingesihle njengoba sekuphele iminyaka eminingi sidonsa kanzima. Besizibuza ukuthi thina sihluke ngani kweminye imijondolo njengoba besinganakiwe ngezidingo,” kusho uMnuz Nsindiso Mcinelwa.
Uthe bona njengabahlali baseMandeni bazoqinisekisa ukuthi bayawonga amanzi kanti futhi nezindlu zangasese baziphatha kahle.
“Siyabonga kakhulu nakumama ukhansela wakulendawo okuwuyena owenze ukuthi sigcine sesizithola lezidingo,” kusho uMnuz Duma.